Kan darbe dagadhaa -
bilisummaa December 21, 2013	Leave a comment
Ahmad Abbaa bulgu
Kan darbe dagadhaa maliif dhiphattanii, Har’a qofa ilaalaa seenaa maal qabdani.
Kan darbe dagadhaa hunda irraanfadhaa, Nutu isinii beekaa gorsa keeyna fudhaa.
Kan darbe dagadhaa oduu jara kibbaa, Nutu qaroomaadha worreen gara kabaa.
Jiruu jaarraa tokkoo duubatti yaaddanii, Qaromina keeynan qixaahuu dhabdanii, Maalumaaf of taatan nu ta’uu dhiiftanii?
Nutu bulchuu beeka kan irree jajjabaa, Kan garaa hammaataa nama gadi qabaa.
Borus akka kalee nu jala bultanii, Waadaa goota keeynaa maliif dagatani ?
Goonni keeyna du’ee har’a jaarraa guutee, Isa of biraa dhabnaan guyyaan nutti dhiite.
Goota hunda caalaa kan biyya qaroomse, Kan hunda jaallatu nama wol qixxeesse.
Bosonaa isin baasee dirree irraa sassaabee, Nama isin taasisee nu cinaa isin dhaabe.
Duubatti hin yaadinaa waan durii keessanii, Gadaafi dimokraasii waa beekna jettanii,
Ifa akka keeynaa eessaa argattani?
Kan darbe dagadhaa kan worra du’anii, Hiyyeessiifi wollaalaan baayyachuun isaanii, Dhiphuu lafaa male maal bu’aa qabani?
Goota keeyna faarsaa nu cinaa dhaabbadhaa, Boqonnaa lubbu isaaf mee waaq kadhadhaa, Kan finciltan hunduu dhiifoma gaafadhaa.
Hojii isaa kabajaa goota keeyna faarsaa, Siidaa isaaf sagadaa abaaboon miidhagsaa.
Kan dogoggortanii kara irraa baatani, Siidaa isaa diiguudhaaf itti bobbaatani, Woyyaaneen diina isaa waan ta’e seetanii? Bar nuti tokkumaa maaliif gowwoomtani?
Bar tokko kan keeyna bar tokko kan jaraa, Dabaree isin binna dhugaan kanaa baraa.
Gidduu keessan seennee adda isin qoqqoona, Nageeynaafi hariiroo hunda isin sarbina, Humna isin dhabsiifnee dabaree isin binna.
Seenaa koo aadaa koo lakkii hin dagadhuu, Biyya koo lammii koo an hin irraanfadhuu.
Diina koo fira koo wolitti hin makadhuu, Fira koo ormoomsee diina koo hin filadhu.
Lammii koo saba koo kan woreeramanii, Badii tokko male du’aan yakkamani.
Lammii koo saba koo kaneen madaahani, Kaneen dhiigni jige harma muramanii.
Lakkii hin dagadhuu har’as nan yaadadhaa, Gumaa bahuu jibbus seenaan barreeffadha.
Goonni kee siif goota atumti faarfadhu, Sidaa isaaf sagadi suuraa isaa dhungadhu.
Inni nama hamaa kan lafa baleesse, Haadha harma muree daa’ima ajjeese, Tokkoo ifa laatee kan kaanii balleesse.
Galata goototaa galata hayyootaa,
Galata qabsaahotaa kan woreegamtootaa.
Har’a dammaqeera mirga koo bareera, Kan hafe guuttachuuf karaa jalqabeera.
Waan feete lalabdus an gorsa kee hin fedhu, Fuul duratti male duubatti hin deebi’u.
Previous Walitti Bu’insii Godina Harargee Bahaa Lubbuu Galaafate
Next LEENCI HAQA ISAA DHABE RAFEE HIN BEEKU HALKANII GUYYAA FALMEE HANGA HAQA ISAA GONFATUU GALEE HIN TAA’U!!!!